Asan-jiolahy tany Toamasina : Jiolahy telo lavon’ny polisin’ny FIP -
AccueilSongandinaAsan-jiolahy tany Toamasina : Jiolahy telo lavon’ny polisin’ny FIP
Asan-jiolahy tany Toamasina : Jiolahy telo lavon’ny polisin’ny FIP
30/09/2017 admintriatra Songandina 0
Jiolahy miisa telo, sokajiana ho isan’ireo tena gaigilahy amin’ny fanafihana mitam-piadiana any Toamasina no lavon’ny polisin’ny FIP any an-toerana, ny alakamisy alina lasa teo. Olon-dratsy miisa efatra hafa izay nahitana vehivavy iray, naman’izy ireo kosa no azo sambo-belona nandritra ny fifanenjehana teo amin’ny roa tonta. Araka ny nambaran’ny kaomandan’ny FIP any Toamasina, Jules Rafaliarivo, dia saika hamaky trano tany amin’ny Dépôt Analakininina ireto jiolahy ireto izao tra-tehaka izao. Raikitra ny fifanenjehana narahina tifitra fampijanonana ireo olon-dratsy, saingy tsy nahasakana azy ireo hitsoaka izany. Satria moa nitam-basy ihany koa ireto jiolahy ireto, dia tsy nihambahamba namaly ny tifitra izay nataon’ireo polisy ireo. Tsy nampihemotra ireo manam-pahefana izany, ka rehefa raikitra ny fifampitifirana , dia lavo ny telo raha toa ka voasambotra ireo efatra ambiny, izay naterina ary nanaovana fanadihadiana ao amin’ny kaomisaria foibe any an-toerana. Araka ny fampitam-baovao ihany koa, dia efa mpamerin-keloka ireto jiolahy maty voatifitra ireto, ary vao roa herinandro lasa izy ireo no nivoaka ny fonja, dia izao niverina nanao ny asa ratsiny izao.
Mbola tratra nandritra ny fisavana ny tranon’ireto olon-dratsy ireto moa ny basy vita gasy miaraka amin’ny ody gasy, sy ny entana nangalarin’izy ireo, talohan’izao nahalavoana sy nahasamborana azy ireo izao. Mitaraina ny amin’ny afitsok’ireo jiolahy ny mponina any an-toerana, ary ankoatra ny fanafihana mitam-piadiana, dia manjaka any Toamasina ihany koa, indrindra fa ao Mangarivotra ny sinto-mahery sy ny asa fanendahana. Tsy hanavahana fotoana, fa na dia amin’ny antoandro be nanahary aza, dia sahy mampihorohoro vahoaka amin’ny alalan’ny zava-maranitra eny an-tanàna ireo mpanendaka ireo. Tsy ny olona mipetraka any an-toerana ihany no hiharan’ny asa ratsy sy ny afitsok’ireo jiolahy, fa dia lasibatra hatramin’ireo mpiala sasatra sy mpizaha tany ihany koa. Tamin’ireny fotoam-pialan-tsasatra ireny, dia maro ireo olona nitaraina ho voatafika sy voaroba tany anatin’ireny hotely fandraisam-bahiny ireny. Lasa ny fananana sy ny vola rehetra, ary nisy mihitsy aza ireo olona tonga niala voly sy nitsangatsangana no naratra vokatr’izay fanafihana mitam-piadiana izay. Mandry andriran’antsy noho izany ny mponina, ka tsara ny fandraisana andraikitra avy amin’ny mpitandro filaminana tahaka izao, indrindra ho an’ireo jiolahy izay efa tena raindahiny sy tsy mety fay. “Tsy hangina ary tsy hilamina mihitsy ny tanànan’i Toamasina raha tsy nisy an’izay. Farany tsy ho tian’ny olona sy ny mpitsangatsangana intsony ny hankaty an-toerana raha mitohy ireny”, hoy hatrany ny voalazan’ny kaomanda Jules Rafaliarivo.